हेगको भूत र भयको भाष्य « Artha Path
हेगको भूत र भयको भाष्य
‘प्रचण्ड’ को भयभित्र विचित्र संयोग भेटिन्छ । कहिले साम्राज्यवादले, कहिले तिनका मतियारले सिध्याइदिने भय प्रकट गरे । शान्तिकालमा प्रतिक्रियावादीहरूले नै सिध्याइदिने भय रह्यो । कहिले दरबार हत्याकाण्ड र कहिले मदन भण्डारीको उदाहरण दिएर दर्जनौँपटक उनले आफ्नो भय प्रकट गरे । जनताको घेरामा रहँदाभन्दा सुरक्षाकर्मीको घेरामा रहँदा ‘प्रचण्ड’मा ज्यादा भय प्रकट भइरहेको छ ।
बाइस वर्षअगाडि सन् १९९८ मा अन्तर्राष्ट्रिय युद्धअपराध अदालतको परिकल्पना स्वीकार भएपछि रोम सन्धि वा रोम विधानको चर्चा सुरु भयो । र, चार वर्षपछि (सन् २००२ जुलाई १) अदालत गठन भयो । त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत भनिन्छ । यसको मुख्यालय नेदरल्यान्डको हेगमा छ । यो अदालतको उद्देश्य नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न संसारका कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउनु हो । कसैकसैले यसलाई मानवताविरुद्धको अदालत पनि भन्छन्, कसैले बर्बरताविरुद्धको अदालत पनि भन्छन् । राज्य राज्यबीचको मुद्दा र सम्बन्धित देशभित्रको मानवताविरोधी मुद्दा यसको क्षेत्र हो । कुनै देशका सरकारले गम्भीर प्रकृतिका मानवताविरुद्धको अपराधलाई सम्बोधन गर्न असफल भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत देखाउने र खोज्ने चलन छ ।
मुख्यतः कुनै जाती, भाषा, धर्म वा अन्य अलग पहिचान भएका समूह नष्ट गर्ने अभिप्रायले गरिने नरसंहार वा जातीय नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधलाई यो अदालतले सम्बोधन गर्दछ । यसको अर्थ राज्यका तर्फबाट लड्ने प्रहरी, प्रशासक, सेना र सरकारप्रमुखदेखि विद्रोही लडाकु, कमाण्डर वा घटनामा संलग्न सम्बन्धित व्यक्ति पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको दायरामा आउँछन् ।
युगोस्लाभियाका पूर्वराष्ट्रपति स्लोभोदान मिलोसोभकदेखि चिलीका तानाशाह अगष्टो पिनोचेसम्म यो अदालतको कारबाहीको सूचीमा परेका छन् । कङ्गो र सर्बियाका राष्ट्रपतिदेखि सुडानका राष्ट्रपतिसम्मलाई हेगले लतारेको छ । यद्यपि, सुडान रोम विधानको पक्षराष्ट्र थिएन । राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा त्यहाँका बहालवाला राष्ट्रपति ओमार हसनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले कारबाही थालेको हो । कङ्गोका विद्रोही नेता थोमस लुबांगाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले कैद सजाय सुनायो । उनिविरुद्ध १५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई युद्धमा होमेको अभियोग लगाइएको थियो । यसै साता मृत्यु भएका कम्बोडियाको पोलपोट सत्ताका मन्त्री नुओन चीलाई पनि हेगले गत वर्ष मात्र आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो ।
नेपाल रोम विधानको पक्ष राष्ट्र होइन । अर्थात् नेपालले रोम विधान अनुमोदन गरेको छैन । पक्ष राष्ट्र नभएपछि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले नेपालका तात्कालीन राज्यपक्ष, विद्रोही पक्षविरुद्ध आफैँले मुद्दाको पहलकदमी लिन सक्दैन । र, नेपालका तात्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षका व्यक्तिहरूविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा प्रक्रियालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले ‘इनिसियट’ गरिहाल्छ भन्नु तत्कालका लागि ठट्टा हो । नेपालको शान्तिप्रक्रियामा सहभागी राजनीतिक दलहरूले ‘निश्चित पात्रलाई कज्याउन’ राष्ट्रसङ्घलाई बोलाएर काठमाडौंमा अस्थायी अदालत (ट्रिब्युनल) गठन गर्लान् ? हिजोको अनमिनै भूमिका देखेकाले अर्को खाली कागजमा ल्याप्चे ठोक्लान् ? बदलाको कोटीहोम लगाउँछु भन्नेहरूले लुकाएको प्रक्रिया यो पनि हो । इराक, कम्बोडिया र अफगानिस्तानका नरसंहारका दृष्टान्त र सन्दर्भ नेपालको सन्दर्भमा कति लागू हुन सम्भव छ ? हेगको मुखौटो बोकेर जात्रा नाचिरहेकाहरूले यो विषयमा जनमत तयार गर्न सकेका छैनन् । अर्थात् हेगको भूत एकाध युटुबेहरूसँग चिच्याउनेहरूको लैलै नै हो अहिलेका लागि ।
नेपालको एउटा संभ्रान्त र कुलीन वर्गले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको राग अलापेको आज होइन, शान्तिप्रक्रिया अगाडि नै हो । सामाजिक संरचनाको केन्द्रमा रहेर नीति र राजनीतिमा चलखेल गरिरहेको ती स्वार्थ समूह फरकफरक रूप र आवरणमा रहेर हेग हेग हेग चिच्याएको विषय नयाँ होइन । हेगलाई सकेसम्म ‘सौदाबाजीको विषय’ बनाउन तिनीहरूले गरिरहेको यथाशक्य प्रयत्नको औचित्यचाहिँ आजको मितिसम्म देखिएको छैन । गोविन्द केसीले उठान गरेको द्वन्द्वको मुद्दा र लेनिन विष्टले रुक्मांगत कुटवालसँग गरेको भेट एकै हो । वर्थलेस । उनीहरूको लबिङ र खर्च कसले व्यहोरिरहेको छ भन्ने तत्कालका राज्य र विद्रोही दुवैलाई थाहा छ, त्यसैले हेगको भूतले तर्साउन सकेको छैन ।
अर्को सवाल, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत पनि शक्तिराष्ट्रहरूको कठपुतली हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि हो । गत वर्ष अफगानिस्तानमा बन्दीविरुद्धको दुव्र्यवहारको आरोपी अमेरिकी सैनिक र गुप्तचर अधिकारीलाई मुद्दा चलाउने विषयमा अमेरिकाले व्यक्त गरेको आक्रोश एउटा नजिर हो । त्यतिबेला अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बल्टनले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई नै अवैध भएको आरोप लगाएको धेरै भएको छैन । प्यालेस्टिनी नागरिकविरुद्ध भएका मानवअधिकारविरुद्धका मुद्दा छानबिन गर्न भएको अनुरोधलाई हेगले सम्बोधनको प्रयास थाले अदालतविरुद्ध नै प्रतिबन्ध लगाइदिने धम्कीहरू पनि सार्वजनिक भए । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसँग अनुरोध गरेकै कारण शक्तिराष्ट्रले कूटनीतिक नियोग नै बन्द भएका नजिर पनि जिउँदै छ ।
यस्ता तथ्यलाई नेपालमा हेगको हल्ला फिँजाउनेहरूले लुकाइरहेका छन् र हेगलाई उसिनेको अण्डासरह प्रचार गरिरहेका छन् । यही प्रचार र केही स्वार्थसमूहको सक्रियता नै भय उत्पन्न गर्न पर्याप्त भइरहेको देखिन्छ । नत्र बाबुराम भट्टराईको हम्बुराही संहिताको प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी र प्रचण्डको हिरो हुने रहर सार्वजनिक हुने थिएन । हेगको कोलाहलले सञ्चार गरेको भयकै कारण तत्कालीन विद्रोही पक्षका नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम आफ्नो मर्यादा नै भुलेर टीका–टिप्पणीको रत्यौलीमा रमाइरहेका छन् ।
भयको विलोम साहस, निर्भय, अभय आदि हुन्छ । भय अर्थात् डर, एक प्रकारको त्रासग्रस्त मनोविज्ञान । खासमा भय ज्ञात वस्तु, पदार्थ, अवस्थाबाट उत्पन्न हुन्छ । अनुभवै नगरिएको स्थितिमा भय उत्पन्न हुँदैन । अर्थात् भय वास्तविक र काल्पनिक हुन्छ । वास्तविक भयले भन्दा बढी काल्पनिक भयले मान्छेलाई भयभित बनाउँछ । अज्ञात भएबाट मान्छे विरलै डराउँछ । जस्तो स–साना बालबालिका अँध्यारोमा किन खेल्छन् ? आगोसँग किन जिस्किन्छन् ? सर्पसँग किन डराउँदैनन् ? साधारण स्थितिमा मान्छेमा किन मृत्युको भय देखिँदैन ? किनकि, उसले अनुभव गरेको हुँदैन । मान्छे ईश्वरसँग किन डराउँछ ? किनकि ऊ कर्मको फलबारे जानकार छ ।
जे. कृष्णमूर्तिले कहीँ लेखेका थिए ‘भय वस्तुतः कायरताको प्रतिकृति हो ।’ उनको भाषामा कायरताको अर्थ आन्तरिक दुर्बलता हो । सङ्कटको सामना गर्ने क्षमता क्षीण हुँदै जाँदा अथवा आन्तरिक दुर्बलता प्रबल हुँदै जाँदा मान्छेलाई भयले छोप्दै लान्छ भन्ने कृष्णमूर्तिको तर्क थियो ।
फियर एन्ड फ्रिडममा फेरेज नेडेस्डी लेख्छन्– भय त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ जहाँ एक विशिष्ट प्रकारको जीवनप्रति मोह हुन्छ । त्यो विशिष्टता कायम राख्नु र त्याग गर्नुबीच स्वतः भयको प्रतिक्रिया देखिन्छ । लौकिक वा सांसारिक मोहबाट अलगाव नहुँदासम्म भय स्थिर रहन्छ । फेरेज आकाङ्क्षा र भयबीच पनि उस्तै सपाट सम्बन्ध केलाउँछन् । एउटा विशिष्टताबाट अर्को विशिष्टतामा जाँदा भय नियन्त्रण त हुन्छ, तर निर्मुल हुँदैन भन्ने उनको ठम्याइ छ ।
अन्तरआत्मा कलुषित भएको अवस्थामा व्यक्ति आरामको निद्रा सुत्न सक्दैन । किनकि स्थायी आशङ्का नै भयको कारण हो । धोकाको भय, बदलाको भय, रहस्य खुल्ने भय, असहयोगको भय इत्यादिले व्यक्तिलाई गाँजिरहेको हुन्छ । अर्थात्, सङ्कटग्रस्त व्यक्ति स्थायी पृथकताको कल्पनाबाट पनि भयभित भइरहेको हुन्छ । यही कारण ऊ सम्झौतापरस्त हुन्छ, आत्मसमर्पण गरिरहेको हुन्छ ।
रिचर्ड गार्नेटको दृष्टिकोण सापटी लिने हो भने कुनै वस्तुसँग अति गहनतम् निकटता वा लगावले मानसिक कष्ट दिइरहँदा व्यक्तिमा भयको जोखिम बढी हुन्छ । हो पनि, शारीरिक कष्ट पो स्नायुगत हुन्छ मानसिक कष्ट कल्पनागत पनि हुन्छ, भावनागत पनि हुन्छ । भयभित केले बनाउँछ ? सङ्कटबाट बच्नका लागि व्यक्तिले यसअघि एकत्रित गरेको सङ्गठित गरेको सञ्चित अनुभवले बनाउँछ ।
जहाँ भयको कारण छैन त्यहाँ भयभित भइरहेको हुन्छ । तर, चोर चोरी गर्न डराउँदैन । छली ठगी गर्न डराउँदैन । कपटी षड्यन्त्र गर्न डराउँदैन । व्यभिचारी व्यभिचार गर्न डराउँदैन । बेइमान असत्य बोल्न वा झुटा मिथ्या भाषण गर्न गराउँदैन । तर, सबैमा समान प्रकृतिको भय हुन्छ । ज्ञात भय । यस्तो बेलामा मान्छे माटोको पुत्लासँग पनि डराउँछ । शरीर, मन र आत्मा कमजोर भइसकेपछि अवरोधसँग सङ्घर्षको अपेक्षाभन्दा भय घनीभूत हुन्छ । यो कर्मको फलबारे ज्ञात भय हो ।
‘प्रचण्ड’ को भयभित्र विचित्र संयोग भेटिन्छ । कहिले साम्राज्यवादले, कहिले तिनका मतियारले सिध्याइदिने भय प्रकट गरे । शान्तिकालमा प्रतिक्रियावादीहरूले नै सिध्याइदिने भय रह्यो । कहिले दरबार हत्याकाण्ड र कहिले मदन भण्डारीको उदाहरण दिएर दर्जनौँपटक उनले आफ्नो भय प्रकट गरे । जनताको घेरामा रहँदाभन्दा सुरक्षाकर्मीको घेरामा रहँदा ‘प्रचण्ड’मा ज्यादा भय प्रकट भइरहेको छ । हिजो विप्लवको भयले सताएको देखियो । हुँदाहुँदा अब लेनिन विष्ट र कमल थापाहरूसँग ‘प्रचण्ड’ भयभित छन् । ज्ञानेन्द्र शाहलाई आफैँले नारायणहिटीबाट गलहत्याएको दाबी गर्ने ‘प्रचण्ड’ तिनै ज्ञानेन्द्र शाहसँग भयभित देखिन्छन् ।
उनलाई थाहा छ, फरकफरक स्वार्थ समूह फरकफरक आवरणमा तर एउटै उद्देश्यले काम गरिरहेका छन् । ती सबका विरुद्ध सङ्गठित मुक्का प्रहार गर्ने शक्ति, साहस र सामथ्र्य क्षीण छ । यसैले भयग्रस्त अभिव्यक्ति दोहोरिने क्रम बढ्दो छ । भयमाथि विवेकले नियन्त्रण गर्ने कि आवेगले ? भयलाई मर्यादाको सीमाभित्र रहेर कज्याउने कि उत्तेजित वा अमर्यादित भएर उछाल्ने ? सम्बन्धित पात्रहरूले नै जानून् ।